I-Russian Blue Cat | Amakati kaNoti
El ikati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia , kanye nePheresiya, uhlanga oluhlonipheke kakhulu. Futhi angikhulumi nje ngesimilo sakhe esizolile nesiqotho, kepha futhi nokuhamba kwakhe nomzimba omncane. Ukubukeka kwale ndoda enoboya kuyindida, kepha ngasikhathi sinye, iyakwazi ukwehlisa labo abayidingayo.
Inobungane futhi inothando, ikati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia lithanda ukuphululwa futhi, ngaphezu kwakho konke, ukufundiswa izinto. Ngabe uyafuna ukuba nguthisha wakhe?
1 Umsuka nomlando wekati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia
2 Izici zomzimba wekati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia
3 Ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia lihlala isikhathi esingakanani?
4 Umlingiswa wekati oluhlaza okwesibhakabhaka waseRussia
5 Ukunakekelwa kwekati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia
7 Ingabe ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia libangela ukungezwani komzimba nomzimba?
8 Kubiza malini ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia?
9 Izithombe zekati ezihlaza okwesibhakabhaka zaseRussia
Umsuka nomlando wekati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia
Yize kungakaziwa kahle ukuthi ivelaphi, ngekhulu le-XNUMX, e-Arkhangelsk (eRussia) amakhophi ambalwa athengwa ayiswa eNgilandi. Kusukela lapho, abantu abaningi ngokwengeziwe baba nesithakazelo kubo, futhi ngo-1880, babukiswa okokuqala ngqa.
Kodwa-ke, ngawo-40 lolu hlobo lwalusengozini yokuqothulwa ngenxa yeMpi Yezwe II. Ukugwema lokho ngokungangabazeki obekuzoba yinhlekelele, bahlangana namakati aseSiamese. Eminyakeni embalwa kamuva, ngo-1970, kwaba nokwenzeka ukuthi sisebenze futhi ukuthola i-Russian Blue emsulwa, futhi ngo-1984 babekwazi ukuqashelwa ngokusemthethweni njengomjaho.
Izici zomzimba wekati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia
Ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia liyikati eliphakathi nendawo kuya kwelikhulu, elinesisindo ku 3,5kg kwabesifazane, no-7kg kwabesilisa. Ikhanda lincane, linokhakhayi oluyisicaba, namehlo aluhlaza okotshani, ahlukaniswe kabanzi kodwa angafiki emaphethelweni.
Inomzimba ovulekile, oqinile, onemilenze emide, futhi embozwe ngoboya obufushane, obukhulu, obuluhlaza ngokumpunga. Abanye bangabuye babe nokukhonjiswa kwesiliva, okuyinto ebizwa isiliva tipping, kodwa kwamukelwa ngokwengeziwe ukuthi ikati linomfaniswano oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia lihlala isikhathi esingakanani?
Isikhathi sokuphila sekati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia I-15 eminyakeni engu-20, ngakho-ke ilingana naleyo yezinye izinhlanga ezinjenge-European evamile. Lezi izindaba ezinhle ngokungangabazeki, ngoba cishe iminyaka engamashumi amabili uzokwazi ukujabulela ubuhle nobumnandi balesi silwane.
Umlingiswa wekati oluhlaza okwesibhakabhaka waseRussia
Ikati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia lizolile kakhulu, kodwa futhi nokungathembi nalabo bantu nezilwane ongazazi. Ungasebenzisana kahle nabo inqobo nje uma bezokuphatha kahle, ngaphandle kokuxhamazela noma ukungezwani; ngaphandle kwalokho, ukuhayiza, ukububula, njalonjalo kuzoba yinto ejwayelekile.
Ngenxa yalezi zizathu, leli yikati elizophila kangcono emindenini - noma ngabe banezingane - abathulile, abathanda ukuchitha isikhathi nomngani wabo onemilenze emine (isibonelo, ngenkathi bebuka ithelevishini noma befunda incwadi), kodwa ngaphandle kokukuhlula. Futhi uma uhlela ukukhulisa umndeni, nabanye imihlahlandlela yenhlalo ungathola ikati lakho ukuthi lenze ubungane nelungu elisha maduzane.
Ukunakekelwa kwekati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia
Ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia lidinga amanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile, ukudla okuseqophelweni nokuxubha nsuku zonke. Kepha ngaphezu kwalezi zinhlupho ezintathu eziyisisekelo, kubalulekile ukumyisa kudokotela wezilwane, njengomdlwane ukuthola yonke imigomo, futhi kanye nomuntu omdala ukuba ahlole impilo yakhe.
Olunye udaba olubalulekile esingeke sikhohlwe yilolo ukudlala. Yize kuyikati elizolile, akufanele ulivumele lithukuthele. Isilwane esibhorekile yisilwane esingeke sithathe isikhathi eside ukwenza izinto okungafanele sizenze, njengokuklwebha ifenisha noma ukuluma.
Ezitolo zezilwane uzothola amathoyizi amaningi, njengezikhombi ze-laser, amabhola, izilwane ezigxotshiwe, izintambo, imidlalo yokusebenzisana ... Thenga lezo ozithanda kakhulu futhi chitha izikhathi ezimbalwa ngosuku uzijabulise nge-feline yakho. Ungamfundisa nemiyalo, njengokuhlala phansi noma ukukhahlela ibhola.
Ikati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia lingaqhosha ngokuba ngomunye wezinhlobo ezithandwa kakhulu ezinempilo enhle kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi, ngokwengxenye, ukuthi abantu abaliguqule neze. Kepha qaphela, lokhu akusho ukuthi awukwazi ukugula, ukude nakho. Kuyisidalwa esiphilayo, futhi njengawo wonke umuntu kungagula, noma kube nengozi.
Ngakho, Kusukela ngomzuzu wokuqala ubona noma ubona ukuthi akaphilile, kufanele umyise kudokotela wezilwane. Izifo ezivame kakhulu kuma-felines yimikhuhlane, i-otitis, i-conjunctivitis, nezinkinga zamathumbu. Uma uthola nemithi yokugoma edingekayo, ungavikeleka kakhulu kuma-virus adala ezinye izifo ezimbi kakhulu, njenge-feline immunodeficiency noma i-leukemia.
Ingabe ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia libangela ukungezwani komzimba nomzimba?
Ukungezwani komzimba nekati kuyinkinga enkulu kakhulu kulabo abathanda lezi zilwane. Kepha ungaqiniseka, ngoba okwesibhakabhaka saseRussia kunengubo enezingqimba ezimbili ezisondelene kakhulu futhi, ngaphezu kwalokho, ziminyene, ngakho inani lezinwele azilahlekile lincane kakhulu kunalezo ezilahlekelwe ezinye izinhlobo.
Kepha uma lokhu kubonakala kukuncane kuwe, kufanele ukwazi lokho ikhiqiza kancane i-glyprotein Fel D1, okuyikho okubangela izimpawu zokungezwani komzimba. Lokhu kwenza ukuthi ibhekwe njengekati le-hypoallergenic.
Kubiza malini ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia?
Ngabe uzothola ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia futhi ufuna ukwazi ukuthi kungakubiza malini? Uma kunjalo, kufanele wazi ukuthi uma uzoyithenga endaweni yokuchwitha, izindleko zimayelana nayo I-700 euro. Uma, ngakolunye uhlangothi, ukhetha ukuyithola esitolo sezilwane, lelo nani lizoba liphansi, cishe ama-euro angama-500.
Izithombe zekati ezihlaza okwesibhakabhaka zaseRussia
Ikati eliluhlaza okwesibhakabhaka laseRussia liyisilwane esihle, ngakho-ke asikwazanga ukuqeda i-athikili ngaphandle kokukunikeza igalari yezithombe yalesi esinoboya. Sithemba ukuthi uyabathanda:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » I-Russian Blue Cat
Isikhungo samazinyo kusho
Ngamukela ikati elifana nalelo elisesithombeni sesibili. Usebenza kakhulu futhi uyahlekisa, muva nje wethule izinkinga zezimila ngenxa yesimo sakhe sangaphambili somgwaqo. Ngaphambi kokuthi ngingawathandi amakati, kepha nginoLeoncio wami ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngizofunda okuningi ngabo kusayithi.
Phendula esikhungweni samazinyo
Nginekati elihle engingazi ukuthi kwakungowaluphi uhlobo kuze kube izolo lapho umuntu edlula khona wangitshela ukuthi luhlaza okwesibhakabhaka saseRussia, igama lakhe ngu-ninel futhi manje ngiyaqonda ukuthi kungani ngenkathi siphuma nomkami wayekhala ebusuku ngaphambi kokuthi simkhiphe futhi sijabule ngiyamthanda izilwane ezinhle kakhulu zonke izinyane lekati kodwa ikakhulukazi i-ninel yami
ISIPHO 2 AMAKATSI OLUHLAZA WERUSSIAN
Banobuntu obuhle kakhulu futhi banothando olukhulu. Bangabesilisa nabesifazane. Bayagonywa, bakhishwe izikelemu, bavinjelwe futhi bane-chip.
Bafunde kakhulu. Bahlale bahlala nami ekhaya lomndeni selokhu bazalwa eminyakeni eyi-4 eyedlule. Ngakho-ke bayintsha ephapheme kakhulu engafanele ukufundiswa ukwenza "izinto ezincane" kubhokisi labo lesihlabathi. Abakaze balume noma baklwebhe noma ngubani ngoba bezwe ubumnandi obubazungezile.
Bayakujabulela ngempela ukubukela, ukukulandela, nokuhlanza eduze kwemilenze yakho ukuze ubaphulule.
Ngibanikeza isipho ngoba eminyakeni emibili eyedlule ngangine-allergies. Yize ngizamile ukukunqoba, kuqhubekele phambili. Futhi angisakwazi ukubanikeza ukunakwa nothando olufanele.
Ngifuna ikhaya lethu sobabili. Bangabazalwane, bebelokhu bendawonye futhi le yindlela abafuna ukuba ngayo. Bazwana ngokumangalisayo. Futhi amakati amabili ayinhlanganisela ephelele yokugcina inkampani eyodwa uma ungekho ekhaya futhi ukuthola ukuphindaphindwa kabili lapho ufika ekhaya.
Abantu ababucayi futhi abanesibopho abafuna ukunikeza nokwamukela uthando oluningi.
Amakati alungele ukuletha eBarcelona.
Izithombe zalawo makati aluhlaza okwesibhakabhaka aseRussia anamehlo ewolintshi akuzona zalolo hlobo, zingamakati e-chartreux, okuluhlobo oluhlukile futhi amehlo awo awolintshi.
Ukwazi kanjani ukuthi ikati lami lizoba likhulu kangakanani
Kufanele lidleni ikati elikhulelwe